#13 Saacadood Ka Dib Howlgalkii waan soo Afjarney Ciidanka Ammaanka Qaranka Soomaaliyed Ayaa Sidaas Yirii - Get Latest News From Horn of Africa
#13 Saacadood Ka Dib Howlgalkii waan soo Afjarney Ciidanka Ammaanka Qaranka Soomaaliyed Ayaa Sidaas Yirii
Ciidamada amaanka dowladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyn soo gabo gabeeyay howlgal ay kula dagaalamayeen ciidamo hubeysan oo ka tirsanaa Al Shabaab.
Inka badan 13 Saacadood ayay ciidamada amaanka ku qaadatay inay soo idleeyay weerarka oo xalay fiidnimadii ka bilowday magaalada Muqdisho, kaasi oo ku bilowday qarax aad u xoogan oo magaalada laga maqlay.
Qaar kamid ah saraakiisha ciidamada ee ku howlanaa howlgalka ayaa shaaciyay in hal ruux oo ka tirsanaa Al Shabaab ay muddo ku qaadatay inay ka saaraan dhismaha dadka rayidka ay deganaayeen oo ku dhow maqaayadda Hillaac UK.
Wuxuu sheegay in ruuxaasi uu muddo dagaalamayay, isaga oo bambooyin iyo rasaas ku ridayay ciidamada amaanka ee isku dayay inay gudaha dhismaha galaan.
“marka aan is dhahno xabada wey istaagtay oo ragii waxba kama noolaa, waxaan maqleynaa rasaas xoogan, mararka qaarna qaraxyo, waxey nala tahay inuu jiro hal Shabaab ah oo wali nool, balse noogu ekaaday mid dhaawac ah, maadaama uu hal goob ka dhaqaaqi la’yahay” ayuu yiri Sarkaal kamid ah Ciidamada amaanka.
Ciidamada amaanka, ayaa shacab farabadan ka soo badbaadiyay dhismayaasha; maka Al-Mukarama, Hilaac UK, Wardheere iyo guri ay daganyihiin qoys oo lagu magacaabo Shideeye, sidoo kale waxaa jira meydad ku hoos ira dhismayaasha dumay, kuwaas oo aan wali la gaarin.
Inka badan 20 ruux ayaa ku dhimatay weerarkii xalay ka dhacay Muqdisho, waxaana dhaawacyo badan la dhigay isbitaalada Erdogan iyo Madiina ee magaalada Muqdisho.